Fampiasan’ny fanjakana ny volan`ny CNaPS Maro ny ahiahy mbola mitoetra
Fisomparana ny « Emetteur » Hametraka fitoriana ny Real TV
Ny talata maraina tamin’ny 6ora sy 31 minitra no tapaka tampoka ny fahitalavitra Real TV, fotoana hamerenana ny fandaharana manokana niarahan’io fahitalavitra io tamin’ny Filoha teo aloha Marc Ravalomanana, hoy ny fampitam-baovao.
Fandriana - Amoron'i mania Ravan'ny orambe mikija ny barazy
Rava niongotra hatramin'ny fotony noho ny fijojon'ny orana nandritra ny herinandro izay ny barazy ao Ambatomirojorojo, Fokontanin'Ambohijato Kaomina ambonivohitr'i Fandriana, mpanondraka velaran-tany 450 ha.
Antananarivo Nitety tanàna ireo fiara mifono vy
Ara-bakiteny ny fahatanterahan’ny teny hoe rava ny tsena omaly teny Analakely, Behoririka, Andravoahangy sy ny manodidina rehetra iny.
Fanagadrana an’i Arphine Rahelisoa Niditra an-tsehatra ihany koa ny UPF
Taorian’ny Holafitry ny mpanao gazety (OJM) izay mitaky tsy misy fepetra ny famoahana, dia naneho ny heviny ary nanipika ny UPF (Union de Presse Francophone),
Antananarivo Hipoka olona hatrany ny maraina
Taorian` ny kabarin` ny filoham-pirenena, izay nilaza fa nitarina 15 andro ny fametrahana ny fahamehana ara-pahasalamana eto amin` ny tany sy ny firenena dia toa lasa fahazarana sisa izany ankehitriny.
Frantsay nandao an’i Madagasikara Tsy mahatoky ny rafitra ara-pahasalamana eto…
Sidina manokana avy any Lafrantsa " Boeing 777" no tonga teny Ivato naka ireo teratany Frantsay sy ireo Malagasy sasany mizaka ny zom-pirenena Frantsay nody any Frantsa ny sabotsy 4 aprily teo .
Fianakaviamben’ny mpanao gazety Avoahy i Arphine !
Manoloana ny fanambarana nataona tompon’andraikitra iray eo anivon’ny rantsana miady amin’ny “cybercriminalité”
Nandritra ny fihaonan`ny filoha Rajoelina tamin`ny mpanao gazety teny Iavoloha ny volana janoary lasa teo dia nanambara izy fa
hampiasaina ny tahirim-bolan`ny CNaPS entina hanatanterahina ireo tanàna vaovao sy toeram-ponenana. Hitodika amin`ny tahirim-bolam-panjakana toy izay hiankin-doha amin`ny mpamatsy vola. Manana tahiry manokana moa ny Cnaps ary afaka manampy tokoa ny fanatanterahana ireo tetikasa ireo. Ankoatra izay, dia afaka mampitombo ny volan`ireo mpandoa latsakemboka ao aminy ihany koa izy. Tsara ihany ny hevitra saingy ny zava-misy eto Madagasikara no tsy hahafahana manatanteraka izany. Amin`izao, Madagasikara dia firenena marefo izay hanjakan`ny kolikoly. Rehefa miresaka kolikoly dia tafiditra ao anatin`izany ny fanodinkodinam-bolam-panjakana indrindra ny tsenambarom-panjakana, izay tena ahitana trangana kolikoly isan-karazany, sady fehezin`ny fanjakana tanteraka. Anisan`ny tsenam-baro-panjakana goavana ho avy moa ny tetikasa goavana ao anatin`ny vinan`ny fitondrana momba ny tanàna vaovao sy toeram-ponenana ary maro dia maro ireo miandry izany. Hatreto aloha dia toa tsy mahasakana ny fitondram-panjakana ny lalàna mifehy ny tsenam-baro-panjakana hifehezana ity sehatra ity amin`ny alalan`ny kitranoantrano amin`ny fanomezana ny tolotr`asa… Eo ihany koa ny fitarazohan`ny fomba fiasa toy ny fampahafantarana ny vidin`ny tolotra. Tsy famoahana an-gazety ireny tolotra ireny ka olom-bitsy ihany no mahafantatra sy mahazo ny tsena na ny efa mahazo ihany ny miverina mahazo. Izany anefa no fomba hisorohana ny fanabontsinana faktiora amin`ny fanatanterahana ny asa. Tsy ara-dalàna ny 50% amin`ny tsenam-panjakana ary tsy misy mangarahara, hoy ireo mpandraharaha maro. Antony mahatonga ny fanjakana hifehy ny tahirim-bolam-panjakana (caisse nationale) ve izany ? Amin`izay mantsy, raha misy tranga fanodinkodinam-bola dia mety voasarontsarona moramora eny ve ? Tsy voahaja ary mbola lavitra ezaka ho an`i Madagasikara ny fepetra momba ny fitantanana ho an`ny seha-panjakana. Marihina fa efa nampiaka-peo mahakasika azy io ny FISEMA (confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar). Raha toa ka eken`ny CNaPS ary ny fangatahan`ny filoha Rajoelina dia ho tafaverina ara-potoana ve izay vola hindramin`ny fanjakana ? Raha tsy tojo amin`ny tanjona hiriana ny tetikasa goavana, dia manana ireo fitaovana entina hamerenana izany ve ny fanjakana ? Hatreto, maro ireo fanontaniana tsy ahazoam-baliny ka lasa miteraka ahiahy.